अन्तरवार्ता – Ganatantra Online
एजेन्सी, ३१ बैशाख । श्रीलंकामा सरकारले फेसबुक, ट्वीटर लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमाथी अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । केही दिनअघि भएको बम आक्रमणपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत विवाद हुँदा हिंसात्मक घटना समेत भएपछि सरकारले सामाजिक सन्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । (more…)...
विगत २० वर्ष देखि घोराहीमा कटाइ सिलाइ तथा व्युट्रिपार्लर व्यवसाय सञ्चालन गदै आउनु भएको महिला उद्यमी विष्णु थापा ले २०६७ सालमा राष्ट्रिय पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नु भएको थियो । घोराही उप महानगरपालिका वडा नं १५ तुल्सीपुर चोक देखि पश्चिम मा रहेको ऊ कटाइ सिंलाइ प्रशिक्षण केन्द्र एवम सप्लाएस तथा ऊ आकृति...
गेहेन्द्र बस्नेत : कार्यकारी निर्माता– चलचित्र लावाजुनी पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले खास नयाँ अभियान त केही सञ्चालन गरेको छैन । व्यवसाय, राजनीति र सामाजिक गतिविधिहरुमा सक्रिय छु । बरु अब चाँडै चलचचित्र लावाजुनीको प्रदर्शनको तयारीमा जुट्दैछु । (more…)...
पत्रकार बसुन्धारा गौतम सँग गरिएको कुराकानी > पत्रकारीता गर्न थालेको कति भयो ? — पत्रकारीता गर्न थालेको करिव दुई दशक भयो । (more…)...
घोराहीदेखी ९ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पाण्डवेश्वर महादेव धाममा आजदेखी श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ लाग्दैछ । बजार क्षेत्र भन्दा टाढा मन्दिर परिसरमै महायज्ञको आयोजना गरीएकोले सुरक्षा चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । (more…)...
फागुन ११ गतेदेखी धारापानीमा लाग्ने महायज्ञको उद्घाटन संघिय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले गर्ने भएका छन् । महायज्ञको मिति नजिकिदै गर्दा महायज्ञ आयोजक मुल समिति तथा उपसमितिहरु क्रियाशिल भैरहेका छन् । सवै उपसमितिहरुले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरागर्न लागीपरेको देखीएको छ । पाँचलाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको महायज्ञको उद्घाटन पुर्व निकालीने शोभायात्रालाई...
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४, १५, १७ र १८ का करिव ६ हजार उपभोक्ताहरुले पिउँदै आएको घोराही खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारहरु उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । (more…)...
माघे संक्रान्ति सबै नेपालीहरुका लागि महत्वपुर्ण पर्व मानिन्छ
भुवन चौधरी अध्यक्ष, थारु कल्याणकारीणीसभा दागं माघ पर्व माघ पर्व अर्थात माघे संक्रान्ति सबै नेपालीहरुका लागि महत्वपुर्ण पर्व मानिन्छ । माघ पर्व सबै नेपालीका लागि भएपनि विशेष गरी आदिवासी जनजाति र थारु समुदायका लागि विशेष महत्व र सबै भन्दा ठुलो पर्वको रुपमा लिने गरिन्छ । आफनो परम्परा र मौलिकताको रक्षा गर्दै परापुर्वकालदेखी...
प्रकाश ओली ४० बर्षपछि सदरमुकाम पाएका रुकुमकोट सहित जिल्लाका ३१ मध्य १९ वडाका जनताहरु बर्षदिनदेखि चैनले सुतेका छैनन् । २०३० सालमा साविक रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसीकोट ल्याइएपछि अन्यायमा परेका त्यस क्षेत्रका जनताको मुहारमा झण्डै ४० बर्षपछि खुशीको सञ्चार भएको थियो । रुकुमपूर्व अलग्गै जिल्ला बनेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले...
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्चा हुँदै गर्दा दङालि जनताहरूमा निकै उत्साह थियो । आफ्नै जिल्लामा मेडिकलको पढाइ हुने भयो र सबै खालको सेवा सुबिधाले सम्पन्न हुनेछौ । कुनै पनि प्रकारका विरामीहरू रिफर हुनु पर्दैन भनेर खुशिले गदगद भएका थियो तर आजको सदन दङ्गालि जनताहरूको उत्साह र खुशि ठिक उल्टो भएका...